Friday September 23, 2016 - 22:45:10 in Wararka by Web Admin
Qodobbada wuxuu ka soo xigtay emaillo, dokumentiyo, fasiraadoiyo jawaabo ay xilliyo kala duwan bixiyeen Norway oo qortay MoU-da, Kenya iyo Soomaaliya. Dhammaantood waxay tilmaamayeen in MoU 2009 ay ku saabsan tahay keliya in labada dal aan midna waxba ka qaban in kan kale uu Guddiga Qarammada Midoobay ee CLCS u gudbiyo soohdintiisa qalfoofta qaaradeedka ka baxsan.
Tusaaleyaashaas oo dhan meelna ugama xusna ayuu yiri in ay MoU 2009 ay tahay in iyada loo raaco habka xallinta khilaafka soohdin badeedda.
Maxay Soomaaliya u dooni kartay, ayay Maxkamadda weydiisay Mona, in ay lugaha la gasho xilli aan soohdinteeda la cayimin? Sharci aanay hor geyn karin si ay kheyraadkaka maqan u hesho iyada oo aan ognahay in Soomaaliya ay aad ugu tiirsan tahay kaalmo shisheeye?
Arabaca Galab ayuu billowday Wareegga Labaad. Kenya soo jeedinteeda halkan ka akhriso halkan:
Waxaa laga wardhowrayaa Go'aanka ay Maxkamaddu riddo ka dib marka ay labada dhinac ka soo jawaabaan su'aalo ay Maxkamaddu weydiisay oo aan idinkula wadaagi doono bartan, haddii Rabbi idmo.
W-Q: Yuusuf Garaad.